"Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao." Jeremia 31:3
"Izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao… : Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao." Isaia 43:1
Omaly maraina dia tapaka ny tadin-kiraroko. Mandra-pahitako iray hafa, dia tara roa minitra ny fiaingako, ka tsy tratrako intsony ilay fiarabe fandehanako. Nisy mpampihorohoro nitifitra tao anatin’io fiarabe io. Raha tsy tapaka tamin’io andro io ny tadin-kiraroko, dia efa maty aho… Tadin-kiraro iray ve, na kisendrasendra, no mihazona ny aiko? Dia iny aho no lasa nanao jery todika, izay nampitebiteby…
Sendra nifanena tao amin’ny lanonana iray ireo ray aman-dreniko. Raha tsy nisy io lanonana io, dia tsy ho nifankahalala izy ireo ary tsy ho nivady. Tsy ho nisy aho. Dia kisendrasendra ve izany no nahaterahako?
Tafiditra tao amina sekoly iray tany Toulouse aho, ary tany no nahitako ny vadiko. Raha latsaka iray monja ny isa azoko tamin’ny fifaninana, dia ho tany Lille aho no nianatra, ary tsy ho nahita azy mihitsy. Dia kisendrasendra izany no nahaterahan’ireo zanako…
Vokatry ny kisendrasendra izany ny momba ahy rehetra? Ankehitriny aho dia velona, miaina, misaina. Rahampitso aho mety ho faty. Kisendrasendra no nahaterahako, kisendrasendra no ahavelomako, kisendrasendra no hahafatesako… Ny kisendrasendra ve no mitondra ny fiainako? Tsy misy antony ahavelomako mihitsy ve izany?
Ny kisendrasendra ve manosika ahy hanao zavatra? Ny kisendrasendra ve mandinika, mahafantatra ny hoavy, mitsinjo ahy, manana tanjona, mikendry izay hahasoa ahy.?
Tsy aleo ve miaiky fa misy :
— Ilay nandamina ny zavatra rehetra mba hahatonga ahy ho teraka, nahary ahy ho toy izao, ary nisy tanjona voafaritra tsara amin’izany.
— Ilay mijery ahy, mitantana ny toe-java-mitranga eo amin’ny fiainako, mikendry izay hahasoa ahy ary tia ahy!
— Ilay mitady ahy, miantso ahy, tsy sasatra mitaona ahy mba hanaiky Azy ary hamela Azy hitia sy hanafaka ahy!
Tsy iza Izy io fa Andriamanitra, tsy Iza fa Jesosy!